यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा महंगा १० हिरोइन, कसको पारिश्रमिक कति ? – PanchKhal Online
Home/मनोरंजन/यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा महंगा १० हिरोइन, कसको पारिश्रमिक कति ?
१. कंगना रनोटः २०१८ मा दिपीका पादुकोणलाई उछिन्दै तेस्रो पटक राष्ट्रिय पुरस्कार जितेकी कंगना अहिले बलिउडमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने हिरोइन हुन् । उनले भर्खरै रिलिज भएको फिल्म ‘मणिकर्णिका’ र आउन लागेको फिल्म ‘मेन्टल है क्या’को लागि १५ करोड पारिश्रमिक लिँदै आफूलाई सबैभदा महंगी नायिकाको शीर्ष स्थानमा राखेकी छिन्
२. दीपिका पादुकोण सिंहः २०१७ मा ‘पद्मावत’का लागि १३ करोड पारिश्रमिक लिँदै बलिउडकी सबैभन्दा महंगी नायिका बनेकी दीपिका २०१८ मा दोस्रो स्थानमा छिन् । उनले मेघा गुलजारको आगामी फिल्मको लागि १४ करोड पारिश्रमिक लिएकी छिन्
८. श्रद्धा कपूरः बलिउड स्टार शशी कपूरकी छोरी श्रद्धा बलिउडका महंगा हिरोइनको सूचीमा आठौं स्थानमा छिन् । हरर फिल्म ‘स्त्री’का लागि ९ करोड पारिश्रमिक लिएकी श्रद्धाको यसै वर्ष बाहुबली स्टार प्रभाससँगको फिल्म ‘साहो’ आउँदैछ । ‘साहो’का लागि पनि उनले ९ करोड पारिश्रमिक लिएकी छिन्